အငယ်ကောင်ကိုလည်ပင်းညှစ်တာများနေပြီလား – Gentleman Magazine
သငျ မြားနပေါသလား (အမြိုးသားကနျြးမာရေး)
သင် လက်နဲ့ အာသာဖြေဖျောက်ပါသလား?? ဘယ်နှခေါက်ပါလဲ?? တစ်ပါတ် နှစ်ခါလား?? တစ်ရက် နှစ်ခါပါလား?? သင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အချိန်ကို သင့် ခေါင်းထဲမှာ မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ ထက် ပိုလာရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် များနေသလားလို့ စိုးရိမ်မိလာမှာပါ။
သတင်းကောင်းကတော့ အာသာဖြေဖျောက်ရာမှာ များတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင် ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ် သင့်နေ့စဉ်ဘဝကို ထိခိုက်မလာမခြင်း မများပါဘူး။
ဘယ်ချိန်မှာ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ စွဲလမ်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသလဲ?? ဒီမှာကတော့ သင့်လက်နဲ့ သင့် Boner ကို အနားပေးဖို့ လိုပြီဖြစ်ကြောင်း ပြနေတဲ့ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေကို ပြထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ တချို့ကောင်တွေက နာတဲ့အထိ လုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒိဒါဏ်ရာဟာ အနည်းဆုံး အရေပြားလန်သွားတာက စပြီး အားအသုံးများလို့ သင့်ထိပ်ဖူးထဲမှာ ကျီးပေါင်း တက်လာတဲ့ ပြသနာထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နာနေရင် သင် လျှော့ဖို့ လိုပါပြီ။
၂. သင့် အလုပ်နဲ့ ဘဝကို ထိခိုက်နေရင်
သောကြာနေ့ညတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မလည်ပဲ တစ်ယောက်ထဲ အလုပ်များနေရင်၊ အိမ်သာထဲမှာ တစ်ချီလောက် လုပ်နေရလို့ အစည်းအဝေးနောက်ကျတာမျိုး ဖြစ်နေရင် သင် သတိထားဖို့ လိုပါပြီ။
၃. သုတ်လွှတ်မရတဲ့ ပြသနာ ဖြစ်နေရင်
တချို့ လက်အရမ်းများတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ တကယ် ဆက်ဆံတုန်းမှာ လက်နဲ့လောက် အရသာ မရှိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့် လက်နဲ့ လုပ်တာများခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦးနှောက်ကို လက်နဲ့လုပ်တဲ့ အရသာကိုပဲ စွဲသွားစေပါတယ်။ အဲဒိလို ဖြစ်နေရင်တော့ ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄. အဲဒါအကြောင်း စဉ်းစားနေတာ မရပ်နိုင်ရင်
နောက်တစ်ခေါက် ဘယ်တော့လုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက သင့်ကို နှောင့်ယှက်နေတတ်ရင် သင့်မှာ ပြသနာ ရှိနေပါပြီ။
၅. ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် မရရင်
စွဲလမ်းမှုအားလုံးကဲ့ အရေးကြီး လက္ခဏာက ထိန်းချုပ်မရတာပါ။ ဆေးလိပ်စွဲသူ၊ လောင်းကစားစွဲသူတွေလို သင့်ကို ဒုက္ခပေးနေမှန်း သိရက်နဲ့ မရပ်နိုင်ရင် အဲဒါ ပြသနာပါ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ အာသာဖြေဖျောက်တာက တခြားဆိုးကျိုးတွေကိုလဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်တစ်ခါ နှစ်ပါတ်ကြာ ဆက်တိုက် လုပ်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ သုတ်ပိုးအရေအတွက်ဟာ ၅၀ ရာနှုန်း လျော့သွားပါတယ်။ သင်နဲ့ သင့်မိန်းမနဲ့ ကလေးရဖို့ ကြိုးစားနေရင်တော့ အဲဒါက ကွိုင်ပါပဲ။
သင့်မှာ ပြသနာ ရှိနေမှန်းသိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? နည်း ၂ နည်းရှိပါတယ်။ ဖြတ်ခြင်းနဲ့ အန္တရာယ်မရှိအောင် လျော့လုပ်ခြင်းတို့ပါ။ အဲဒိနည်းလမ်း ၂ ခုစလုံး ကြိုးစားပြီးတော့ မအောင်မြင်ရင်တော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးရမှာပါ။
အာသာဖြေဖျောက်ခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘဝကို ထိခိုက်လာရင်တော့ တခြား အကျင့်ဆိုးတွေ လိုမျိုးပဲ ဖြတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
သငျ လကျနဲ့ အာသာဖွဖြေောကျပါသလား?? ဘယျနှခေါကျပါလဲ?? တဈပါတျ နှဈခါလား?? တဈရကျ နှဈခါပါလား?? သငျ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အခြိနျကို သငျ့ ခေါငျးထဲမှာ မှတျထားပွီး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါ ထကျ ပိုလာရငျတော့ သငျ့ကိုယျသငျ မြားနသေလားလို့ စိုးရိမျမိလာမှာပါ။
သတငျးကောငျးကတော့ အာသာဖွဖြေောကျရာမှာ မြားတယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သငျ ဘယျလောကျပဲ လုပျလုပျ သငျ့နစေ့ဉျဘဝကို ထိခိုကျမလာမခွငျး မမြားပါဘူး။
ဘယျခြိနျမှာ အန်တရာယျမရှိတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးဟာ အန်တရာယျကွီးတဲ့ စှဲလမျးမှုအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပါသလဲ?? ဒီမှာကတော့ သငျ့လကျနဲ့ သငျ့ Boner ကို အနားပေးဖို့ လိုပွီဖွဈကွောငျး ပွနတေဲ့ စိတျပိုငျးရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လက်ခဏာတှကေို ပွထားပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ တခြို့ကောငျတှကေ နာတဲ့အထိ လုပျတတျပါတယျ။ အဲဒိဒါဏျရာဟာ အနညျးဆုံး အရပွေားလနျသှားတာက စပွီး အားအသုံးမြားလို့ သငျ့ထိပျဖူးထဲမှာ ကြီးပေါငျး တကျလာတဲ့ ပွသနာထိ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ တကယျလို့ နာနရေငျ သငျ လြှော့ဖို့ လိုပါပွီ။
၂. သငျ့ အလုပျနဲ့ ဘဝကို ထိခိုကျနရေငျ
သောကွာနညေ့တှမှော သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မလညျပဲ တဈယောကျထဲ အလုပျမြားနရေငျ၊ အိမျသာထဲမှာ တဈခြီလောကျ လုပျနရေလို့ အစညျးအဝေးနောကျကတြာမြိုး ဖွဈနရေငျ သငျ သတိထားဖို့ လိုပါပွီ။
၃. သုတျလှတျမရတဲ့ ပွသနာ ဖွဈနရေငျ
တခြို့ လကျအရမျးမြားတဲ့ ယောကျြားတှဟော တကယျ ဆကျဆံတုနျးမှာ လကျနဲ့လောကျ အရသာ မရှိတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ သငျ့ လကျနဲ့ လုပျတာမြားခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ဦးနှောကျကို လကျနဲ့လုပျတဲ့ အရသာကိုပဲ စှဲသှားစပေါတယျ။ အဲဒိလို ဖွဈနရေငျတော့ ကုသဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၄. အဲဒါအကွောငျး စဉျးစားနတော မရပျနိုငျရငျ
နောကျတဈခေါကျ ဘယျတော့လုပျရမယျ။ ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတဲ့ အတှေးတှကေ သငျ့ကို နှောငျ့ယှကျနတေတျရငျ သငျ့မှာ ပွသနာ ရှိနပေါပွီ။
၅. ဖွတျဖို့ ကွိုးစားနပေမေယျ့ မရရငျ
စှဲလမျးမှုအားလုံးကဲ့ အရေးကွီး လက်ခဏာက ထိနျးခြုပျမရတာပါ။ ဆေးလိပျစှဲသူ၊ လောငျးကစားစှဲသူတှလေို သငျ့ကို ဒုက်ခပေးနမှေနျး သိရကျနဲ့ မရပျနိုငျရငျ အဲဒါ ပွသနာပါ။
တဈခါတဈလမှော အာသာဖွဖြေောကျတာက တခွားဆိုးကြိုးတှကေိုလဲ ပေးနိုငျပါတယျ။ တဈရကျတဈခါ နှဈပါတျကွာ ဆကျတိုကျ လုပျလိုကျရငျ သငျ့ရဲ့ သုတျပိုးအရအေတှကျဟာ ၅၀ ရာနှုနျး လြော့သှားပါတယျ။ သငျနဲ့ သငျ့မိနျးမနဲ့ ကလေးရဖို့ ကွိုးစားနရေငျတော့ အဲဒါက ကှိုငျပါပဲ။
သငျ့မှာ ပွသနာ ရှိနမှေနျးသိရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ?? နညျး ၂ နညျးရှိပါတယျ။ ဖွတျခွငျးနဲ့ အန်တရာယျမရှိအောငျ လြော့လုပျခွငျးတို့ပါ။ အဲဒိနညျးလမျး ၂ ခုစလုံး ကွိုးစားပွီးတော့ မအောငျမွငျရငျတော့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာ ကြှမျးကငျြပညာရှငျနဲ့ ဆှေးနှေးရမှာပါ။
အာသာဖွဖြေောကျခွငျးဟာ မကောငျးတဲ့ အမူအကငျြ့တော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ဘဝကို ထိခိုကျလာရငျတော့ တခွား အကငျြ့ဆိုးတှေ လိုမြိုးပဲ ဖွတျပဈဖို့ ကွိုးစားရမှာပါ။
Previous: အမျိုးသားတို့ကို ညှို့ငင်နိုင်သည့် အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း(၅)ခု
Next: အောင်မြင်ခြင်းအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်